Vanopindirana rudzi rwakakosha kwazvo rwezvakanaka zvemakemikari zvigadzirwa, kukosha kwayo irudzi rwe "wepakati", ndiko kugadzirwa kwezvimwe zvigadzirwa pakati pechigadzirwa, sekugadzira chigadzirwa chinogona kuve chigadzirwa kubva pakati, mari yekuchengetedza, from inoshandiswa zvakanyanya mumishonga, mishonga yekuuraya zvipuka, pendi, madhayi uye zvinonhuwira zvinogadzirwa. Mumunda wezvekurapa, wepakati chinhu chakakosha chinongedzo chemakemikari indasitiri yezvokurapa, mukuita kwemushonga wezvinodhaka zvemamwe makemikari mbishi zvigadzirwa uye zvigadzirwa zvemakemikari, mushoko, rinoshandiswa mukugadzira izvo zvinoshanda zvemishonga zvigadzirwa.
Uye mishonga yezvipembenene yepakati, iri zvakare ichave maviri kana anopfuura ekurima mbishi zvinhu pakati pepakati. Nhasi, isu tinonyanya, mishonga yekuuraya zvipuka.
Mishonga yekuuraya zvipuka inoshandiswa kudzivirira, kubvisa kana kudzora njodzi dzekurima, chirwere chemasango, tupukanana, huswa nezvimwe zvinhu zvinokuvadza uye zvine chinangwa kudzora kukura kwezvirimwa, zvipembenene, kemikari synthesis kana zvimwe zvinhu zvakasikwa zvinotorwa kubva kuhupenyu, chinhu kana musanganiswa wezvinhu zvakawanda. uye gadziriro dzavo. Mupfungwa yakafara, mishonga yekuuraya zvipuka mhando dzekudzivirira uye chirimwa chekudzivirira chirimwa, dziviriro yezvirimwa ine mishonga yesora maererano nekushandiswa kwemishonga yekuuraya zvipuka, mishonga yekuuraya zvipuka, fungicides uye yekukura kwezvirimwa, nezvimwewo, zvinonyanya kushandiswa mukudzivirira kwezvirimwa; Pamakirasi ekudzivirira zvirimwa emishonga yekuuraya zvipuka anosanganisira rodenticide, mishonga inodzinga umhutu, zvekushandisa nezvimwewo, zvinonyanya kushandiswa mukurapa kwekugara, hutano hweveruzhinji, manejimendi manejimendi, mwaka weindasitiri, kudzora zvipembenene, mishonga, kuchengetedza huni, kuchengetedza huswa uye mimwe minda.
Kupera kweindasitiri yemushonga wezvipembenene mukemikari indasitiri cheni, ndeyeye yakanakisa indasitiri yemakemikari. Pesticide indasitiri cheni kumusoro kwerwizi mafuta / kemikari nemamwe maindasitiri, kuti ipe zvigadzirwa zveiyi indasitiri indasitiri; Middle indasitiri inonyanya kusanganisira vepakati, tekinoroji, gadziriro (zvidimbu zvitatu; Yekushandisa kwekurima uye isiri-yekurima yekumvura mashandisirwo. Pesticide indasitiri kuvimba nekwazvino tekinoroji, r & d kushandisa hombe, kutenderera kwakareba, njodzi uye yakaderera budiriro. nenzvimbo yemapurazi kudzikisa kupokana, kushandiswa kwakawanda kwemishonga yekuuraya zvipuka kuitira kugadzirisa goho pachikamu cheyuniti ndiyo nzira yakakosha yekugadzirisa dambudziko rechikafu.
Mhando dzakasiyana dzemishonga yekuuraya zvipuka dzinoda akasiyana epakati mukugadzira maitiro. Zvekurima mbishi zvigadzirwa kugadzira zvigadzirwa, zvakare musanganiswa wezvinhu zviviri kana kupfuura zvinhu zviri pakati pepakati. Mune mishonga inouraya zvipembenene inogona kunzwisiswa seyunnergistic mumiririri, inozivikanwawo seyakagadziriswa epakati. Pakutanga inoreva kushandiswa kwemarasha tara kana peturu zvigadzirwa seyakagadzirwa zvinhu zvekugadzira zvinonhuwira, dhayi, resini, zvinodhaka, senge plasticizer, rabha accelerator mukuita kwemakemikari zvigadzirwa, zvinogadzira pakati pechigadzirwa.
Vapakati mune iyo synthesis inowanzoitwa mukupindura ketera, kupatsanura uye kuchenesa kwepakati kune, kazhinji mune tekinoroji yekubvisa. Pesticide intermediates uye chloroform kudhizaina makemikari bhizinesi akajairika unit oparesheni, echinyakare mashandiro maitiro anowanzo gamuchira iyo distillation ikholamu, iyi mhando yekushanda maitiro yakaoma, yakaderera kuburitsa kugona, simba rekushandisa rakakura, nekudaro nekuwedzera kwekudyidzana kwenzvimbo yebasa uye kufambira mberi kwekugadzirwa kwetekinoroji, mazhinji mabhizinesi anotanga kukwidziridza tekinoroji, uye sarudza inoshanda zvakanyanya maitiro ekushanda. Iyo solvent yekubvisa nzira yave iko kuburitsa kwemakemikari mainjiniya chikamu cheakanyanya mashandiro unit. Solvent dhizaini ndeyekusarudza yakakodzera dhisiki, mbishi zvinhu zvakasanganiswa nemudziyo mumiriri, mbishi zvinhu zve organic chikamu kuchinjisa emvura kupinda mune yekuchera mumiriri, organic chikamu chakaburitswa mushure maviri maviri chikamu chikamu. Iyi nzira iri nyore, yakakwira kudhizaini kushanda, yekudzora solvent yaive yakachipa, yekuchera solvent inogona kudzokororwazve panguva imwechete, iyo inoshanda yakazara yakazara mutengo kuchengetedza.